Varairidzi vanga vari pakuramwa mabasa vanombosendeka danho iri vachiti vavimbiswa nehurumende kuti iri kugadzirisa zvinhu.
Varairidzi vanga vachiramwa mabasa vachida kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo zvemihoro nemari nekubatsirikana, vanoti vambomisa kuramwa mabasa uku mushure mekuvimbiswa nehurumende kuti iri kugadzirisa zvichemo zvavo nekukasika.
Nhengo yerimwe remasangano apinda mumusangano uyu, reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, VaAbiot Moyo, avo vanomirira varairidzi vakaremara, vanoti masangano ose awirirana kuti vambopa hurumende mukana wekugadzirisa zvinhu, ivo vachimbomisawo kuramwa mabasa uku.
VaMoyo vanoti vari kutarisira kusangana zvakare nevamiriri vehurumende pakati pesvondo rino.
Vanotiwo hurumende yavavimbisa kuti vose vakanga vari pakuramwa mabasa havasi kuzotorerwa matanho sezvakanga zvamboziviswa neboka reCivil Service Commission, iyo yakanga yazivisa kuti vose vakaramwa mabasa vaizobatirwa mari dzemazuva avasina kushanda.
Studio 7 haina kukwanisa kubata Muzvinafundo Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Hurukuro naVaAbiot Moyo